» के धुम्रपान गर्नेहरु कोरोनाको बढी जोखिममा पर्छन् ?
के धुम्रपान गर्नेहरु कोरोनाको बढी जोखिममा पर्छन् ?
१५ चैत्र २०७६, शनिबार २१:२३
विश्वभरीमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै मानिसहरुलाई सावधानी अपनाउने तथा सरसफाईमा ध्यान दिन आग्रह गरिँदैछ ।नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशहरुमा लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । यसबीच मानिसहरुलाई भीडभाड नगर्न तथा भीडभाड हुने स्थानमा नजानका लागि समेत आग्रह गरिँदैछ ।
कोरोना भाइरसको बारेमा मानिसहरु सावधान त छन् । तर, त्यसको खतरा बढी रहेको त छैन भन्ने कुरामा सशंकित पनि छन् । विभिन्न अध्ययनहरुले के कुरा प्रमाणित भइसकेको छ भने प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणको खतरा बढी छ ।
यूरोपियन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनका अनुसार धुम्रपान गर्नेहरुलाई पनि कोरोना संक्रमणको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । अन्य केही रिपोर्टहरुमा समेत यही कुरालाई प्राथमिकताका साथ चित्रण गरिएको छ । आउनुहोस्, यसबारेमा चर्चा गरौं ।
धुम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा नराम्रो प्रभाव पर्छ । कोरोना भाइरसका बारेमा विशेषज्ञहरुको भनाइ के छ भने यो भाइरस हाम्रो फोक्सोसम्म नै पुग्छ र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्तो समस्या पैदा हुन्छ । फोक्सोमा पुगेर यसले रक्तसञ्चारलाई नै प्रभावित गरिदिन्छ र हाम्रो अन्य अंगहरुसम्म पुग्नबाट रोकिदिन्छ । त्यो बेला फोक्सो कमजोर हुनु पनि कोरोना संक्रमणको स्थितिमा खतरनाक हुनसक्छ । कोरोना भाइरसले सिधै फोक्सोमा आक्रमण गर्नुको अर्थ के हो भने, यदि तपाईंको फोक्सो पहिलादेखि नै मजबुत छैन भने त्यसले भाइसरको सामना कसरी गर्नसक्छ ?
चीनका चिकित्सकहरुले परीक्षणका लागि कोरोना भाइरसका ९९ जना बिरामीहरुको नमूना संकलन गरेका थिए । जसमा के पाइयो भने बृद्ध–बृद्धाहरुको तुलनामा धुम्रपान गर्ने व्यक्तिहरुको मृत्युको संख्या बढी थियो ।
बीबीसीको एउटा रिपोर्ट अनुसार, जुन व्यक्ति अत्यधिक मात्रामा धुम्रपान गर्छन् । उनीहरुले कोरोना भाइरसको खतरालाई कम गर्नका लागि धुम्रपान गर्न छाडिदिनु नै उचित हुन्छ ।